Raddin Shubbaha: Dilkii Casmaa Bin Marwaan. (Difaaca Nebiga NNKH) - Caasimada Online
Home Diinta Raddin Shubbaha: Dilkii Casmaa Bin Marwaan. (Difaaca Nebiga NNKH)
Raddin Shubbaha: Dilkii Casmaa Bin Marwaan. (Difaaca Nebiga NNKH)
Qormadani waa taxanaha raddin shubbaha oo aanu ku raddineynay qoraallo uu inoosoo direy yar Soomaaliyeed oo sheeganaya inuu ka baxay diinta Islaamka, waxyaaba badanna oo ay beri ka tahay ku tuhmaya diinta Islaamka iyo ahalkeeda. Su’aalo badan oo uu qabay iyo shubbaha ayaa ka raddinay, tanna waxaan rajeyneynaa inay mari doontii halkii aan shubbahaadkii hore ku raddinay hadduu Eebbe idmo.
Qodobka maanta u baahan inaynu raddinna ayaa ah mid aynu ciwaanka kusoo qaadannay, malaha yarku maanta cilmi culus buu lasoo banbaxay, marka aad aqrisa sida uu qisada u soo min guuriyey. Waan hubaa wuxuu isleeyahay sida aan ka dhadhamiyey qormadiisa, tani waa middii aad ku dagi lahayd Muslimiinta, waayo wuxuu naga filanayaa inaanu u helin karin jawaab raddin ah waxa uu ka hadlay maadaama uu isleeyahay masdar Islaami ah ayaad kasoo xigatay.Wuxuu yarkani soo min guuriyey qisa wuxuuna xusay halka uu kasoo qaatay, macnaha kitaabka uu kasoo qaatay, laakiin waxaan ugu tahniyadeynayaa hadal afeef u yara muuqday ayuu xusay oo ahaa qisadani xadiis shariif ah ma ahan. Waxaan u fahmay inuu yara dareensan yahay waxani inaanay ahayn xaddiis iyp xujo tooni, laakiin sababta uu u soo daliishaday ayaan garan la ahay. Ma wuxuu is yiri kitaabka uu kasoo daliishaday waa kitaab axkaam iyo sharci mise waa kitaab taariikh? Nacam kitaabka uu xusay waa kitaabka la yiraahda Dabaqaat Al Kubraa ee Ibn Sacad uu leeyahay. Waa kitaab taariikheed oo ka warramaya taariikhda iyo dhacdooyinka, wixii sax iyo khaladba leh, wuxuuse ku fiican yahay qisooyinkiisa daba gal iyo dabaraac ayay leeyahiin loogu haggaagi karo halkii ay asal ka yimideen, waa marka la eego silsiladaha ay ku yimaadaan qisooyinka kuqoran kitaabkaas.Kitaab kastoo Muslimna waa sidaas, oo ka warrama taariikhda, waxaad arkaysaa kitaab kasta in ka buuxaan qisooyin aanan xaqiiq ahayn, markii la eego silsiladaha ay qisooyinkaasi ku yimaadeen.Islaamku mahan sida masiixiyadda iyo Yahuudda oo kale, xataa axaadiista iyo qisooyinkayaga Islaamiga ahi waa kuwa soocan oo lagu asteeyay xaqiiq iyo war saxa. Culima buu Ilaahay usoo saaray kala rajaxda wixii sax ah iyo wixii khalad ah sida axaadiista shariifka ah oo kale.Qisada uu maanta inoosoo werinaya yarkani sidan buu usoo qorey!!, bal aynu wada aqrinna marka hore, kadibna aynu raddinna hadduu Eebbe idmo!!.
‘‘Waa sheekadii Maxamad iyo Hooyadii huruday ee ilmuhu naaskeeda jaqayay
Dilkii arxan la’aanta ahaa ee loo geystay gabadhii Asma Bint Marwaan axaadiista laga heli maayo, waxase uu ku cadyahay kutubkii caanka ahaa ee Ibn Ishaq, boggiisa 675.
Ka dib marki la dilay Abu Afaka, oo loo dilay dhaliil uu dhaliilay Maxamad xasuuqii uu ku xasuuqay odayaashii Qureysh Badar, Asma b. Marwaan oo aad uga carootay dhacdadaas (dilka Abu Afak iyo sababta keentayba) baa ku eedeysay Maxamad iyo asaxaabtiisii tix gabay ah oo ay ku cambaareynesay. Dhaliishaas ay dhaliishay oo ay ku gabayday darteed buu mar kale Maxamad ku dardar geliyay asaxaabtiisii in ay dilaan gabadhaas.
Asma b. Marwaan waxaa dilay Umayr b. Adi al Khatmi oo uu Maxamad soo diray. Waxaad ka heleysaa kitaabka al-tabaqat al-kabir ee Ibn Sa’d oo leh sidatan:
Asma waxay ahayd xaaskii Yazid Ibn zayd Ibn Hisn al-Khatmi. Waxay wax ka sheegi jirtay Islaamka, waxayna ka careysiin jirtay nabiga iyada oo dadka ku direysa (tusineysa dhaqankiisa).
Waxay sameysay tix (gabay) ah oo ay ku dhaliileyso Islaamka iyo dadka raacsan ama muslimiinta. Umayr Ibn Adi baa u yimid xilli habeen ah oo uu gurigeeda galay. Carruurteeda ayaa hareereheeda jiifay oo wey hurdayeen. Waxaa iyada hoosteeda ahaa ilma yar oo naaskeeda jaqayay. Gacantiisa buu ku baadi goobay halka dadka hurdaa ay kala joogaan, waayo wuxuu ahaa cammoole ama indhoole. Wuxuu markaa gacnatiisa uga soocay carruurtii ku hareereysneyd oo uu mid mid uga bixiyay hareereheeda iyo hoosteeda. Markaas buu golxobkiisii/seeftiisii geliyay xabadkeeda ama feeraha ilaa ay middidii ka soo baxday dhabarkeeda dambe.
Aroortii buu salaadda kula tukaday nabiga (masjidkii) al-Madina. Nabigii ilaahaybaa ku yiri markaas: “Ma khaarajisay/dishay gabadhii ina Marwaan ahayd?”. Wuxuu markaa Umayr ku jawaabay “Haa – Arrintaas wax dhib ah ma iiga imanayaan?”
Markaas buu yiri nabigu (Maxamad) “Laba neef oo ari ah iska hertin meyso arrinkaas”
Kelmeddaasi waxay ahayd tii ugu horreysay ee laga maqlo nabiga Allah afkiisa. Nabigii Allah (Maxamad) baa markaas u magac bixiyay Umayr oo siiyay magaca ama naaneysta ah “Basiir” oo micneheedu yahay “Kii wax arkayay”.
Isla markii uu dilay Asma, Umayr oo imminka wata magaca kore ee ah Basiir baa u tegay reerkii gabadha oo halkaa kula jeesjeesay isagoo leh waa kanoo waan soo dilay gabadhiinnii ee maxaad iga qaadi kartaan? Hortooda buu ku qoslayay oo uu lahaa anaa dilay oo waa ikan aan idnla joogee, maxaad ka sameyn kartaan? Awood ay wax uga qabtaanna meysan lahayn.
Markaa waa maxay wanaagga diimeed ee uu maxamad keenay iyo wanaagga aad ka sugeyso diin beenaad aasaaskeedii halkaas ka yimid.
Waxaad aragtaa dulucda sheekada oo ah qof taabacsanaa Maxamad oo si dhuumaalysi/tuuganimo iyo khayaano ah ku galay qolkii jiifka hooyo aan is difaaci karin oo carrurrteeda la jiifta, islamarkaana dilay oo nafta ka gooyay iyadoo naaskeeda uu jaqayo ilmeheedii markaas ugu yaraa een weli naaska ka go’in.
Qof baniaadam ah oo caqli iyo iimaan inta ugu yar dunida haystaa ma sababeyn karaa waxa halkaas ka dhacay oo shaqsigaasi geystay?
Asma Bin Marwaan meysan ahayn qof halis gelin karta ammaanka iyo nafsadda Maxamad iyo asaxaabtiisaba? Dembigeedu waxaa uu ahaa oo kaliya in ay af ahaan uga hortimid dilkii Maxamad uu dilay Abuu Afak oo ahaa nin kale oo asna diiday maxamad mabdi’iisii iyo mu’amaraadkiisii.
Abu Afak wuxuu ahaa nin Yahuudiya oo ay da’diisu aad u weyneyd (sida la yiri waxa uu ahaa 120 jir markaas), waxaana asna la dilay asaga oo hurda marka uu asna wax ka sheegay Maxamad.
Arrinta halkan kaaga soo baxaysaa waa xaqiiqada sheekada beentaa ee Maxamad ay bilowgii ku saleysneyd oo ah in aaney wixiisu ku dhisneyn fikir dad laga dhaadhiciyo ama caqli iyo maskax wanaagsan wax lagu qaato, laakiin ay had iyo goor tiisu ku saleysan tahay khasab iyo jajuub.
Iyo xaqiiqada ku dhisan in had iyo goor Maxamad iyo intii diin beenaaddiisa qaadataba ay xoog iyo cabsi iyo dil iyo dhiig la daadiyo ay wax ku muquuriyaan. 1400 sano welina wey socotaa.
Bal mar kale isweydii halka waxa kan aad ku doodeysaa ay salka ku hayaan?
Asmaa ma ahan magaca ugu horreyn, waa Casmaa bint Marwaan, labada magacna Carabi ahaan waa kala mid oo labaduba waa magacyo jira oo loola baxa hablaha Carbeed. Waa dhici kartaa in english ahaan aad u qoreysa, laakiin intaas waa sixid magaca quseysa.
Dhanka kale qisadan wuxuu yarkani usoo qaatay inaanu nebi Muxammad (NNKH) noqon karin nebi maadaama falka noocaas ahi uu sameeyay. Sidaa daraaddeed baa halka ugu hooseysa qormadiisa wuxuu oranayaa bal is weydii mar kale halka ay waxa aad kudoodeysa (diinta Islaamka) salka ku hayaan?
Nacam diinta aan ku doodaya waxay salka ku haysaa Muxammad xabiibkii Alle raxmaddii Islaamka iyo koonka, nimay indhahiisa u ooyn doonaan si umaddan dhan naarta looga badbaadiya maalinta Qiyaama, nimay naxariis qalbigiisa buuxisay, nin markii koonka oo dhan la halligi lahaa yiri ”Maya waxaan rajaynayaa kuwa dhabarkooda kujira inay noqon doonaan kuwa diinta u gargaara”, naxariis iyo nabadda Alle dushiisa ha ahaato.
Raxmaddii koonka ayay salka ku haysaa diintani qiimaha badan ee naxariista la timid. Haah!! waxay la timid naxariis, Muxammadna (NNKH) adiguu kaaga naxariis badnaa waalidkaaga.
Waxaan kutusi doonaa inuu ahaa ninka ugu naxariis badan koonka, Alle kor ahaaye isagoo Quraanka arrinkaasi inooga warramaya wuxuu yiri ”.
” فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ” ” آل عمران 159″
Sidoo kale Alle sarreeye wuxuu leeyahay asagoo nebigiisa la hadlaya
Sidoo kale wuxuu yiri Alle asagoo ka warramaya naxariista nebigiisa iyo inuu caalamka oo dhan raxmad u yahay
Saxiixa Muslim waxaa kusugan in nin reer miyi ahi uu ku kaajay masjidkii nebiga ula kac, markaasay saxaabadii damceen inay dilaan, markaasuu nebigu (NNKH), yiri ”daaya ha dhamaystee!!, markuu dhamaystay!! baa wuxuu nebigu (NNKH) saxaabadiisii amray in biyo lagu meydho halkii uu ku kaadiyey ninka reer miyiga, markaasuu inta aad ula yaabay naxariista nebiga (NNKH) baa wuxuu yiri ”Allahayoow!! aniga iyo Muxammad (NNKH) noo naxariisa”. Sidoo kale qisaddii Islaamidda Thumaama boqorkii reer Yamaama inaad maqashaan jeclaa, umase malaynayo inaad maqashay, aqirsay iska daaye. Sidoo kale qisada kusugan saxiixeynka Bukhaari iyo Muslim ee awrka baahida geedka kula xirnaa ee nebigu (NNKH) markuu arkay la ilmeyay ee ninka Ansaariga ahi lahaa inaad maqashay baan jeclaa, umase malaynaya inaad maqashay aqris iskaba daaye.Maxaad moodday shaqsi bahaa’imkii iyo raggii ragga ka diley iyo kuwii masjidkiisa ku kaajay iska saamaxaya oo u dhimrinaya hadal qabowna u oranaya, ma waxay kula tahay inuu haweeney ilma nuujineysa uu dilayo, ama amraya dilkeeda?Duuduub qisada aad soo xigatay oo dhan halka ay ku taal sadarrada dambe ayaan kugu tusi doonaa, horey ayaanna kuugu sheegey in wax waliba oo aad Islaamku ka oranaysa ay ku yaallaan Bible-ka Islaamkuna uu beri ka yahay. Fikraddan foosha xun in Baybalku ay dhex taal, Islaamkuna inuu beri ka yahay ayaan iyana ku tusin doonaa..Ugu horreyn qisadani sida aad xustay kitaabka Dabaqat Al Kubra ayay ku taal, isla kitaabka ayaana inoo sheegaya halka ay asal ka timid iyo sil siladdeeda. Waxaa habbooneyd intaadan soo min guurinin inaad silsiladda qisada dib u yara jalleecda, lacalla ay dhici lahayd inaad jahligaada dareento, oo aad ka xishoota inaad soo bandhigta waxani. Sidoo kale waxaan kutusi doonaa in lagugu soo khalday mowduucaan hadduu Eebbe idmo.Kitaabka Dabaqat Al Kubra juzka 2d safxada 27d ayaad ka eegtaa qisada iyo silsiladdeeda. Qisada oo dhami waa been abuur, lagu been abuurtay nebiga (NNKH), waxaana kutusinayaa inaad kusoo kadsoontay been abuurkan. Marka aad furta kitaabka Ibn Sacad ee Dabaqat Al Kubra juzka 2d, safxada 27d, waxaa kuusoo baxaysa ciwaanka Sirriyaddii Cumeyr bin Caddiyi.Ugu horreyn qisada waa Mowduuc (mowduucna waa wax lagu been abuurtay nebiga ”NNKH”). Bal eeg kitaabka Silsilat Al axaadiis ad daciifah wal mowduuc, ee Imaam Maxammad Nasruddiin Al Albaani, safxada 33d. ruwayaadda 6013. Wuxuu oranayaa waa Mowduuc, Al Qudaaci baa Musnad Shihaab kuxusay (2/46/ 856), sidoo kale Ibnu Jowzi ayaa ku xusay Al Cilalka, iyagoo xusay in ruwaayaddani ay ku timid dariiqadaMuxammad ibnu Ibraahiim oo kasoo weriyey Muxammad ibn Xajaaj Al Lakhmi, oo kasoo wariyey Ibraahiim Al Waasiti, oo ka soo weriyey Mujaalid ibn Saciid oo kasoo weriyey Shicbi oo kasoo weriyey Ibn Cabbaas.Qisada iyo qaabka loosoo weriyey ee culimadu xuseen marka aad eegta kitaabka silsilat al axadiis ad daciif ee Imaam Al Albaani, waxaad arkaysaa in qisadan uu soo minguuriyey yarka oo silsiladdeeda wadata lagu xusay bogga aynu soo xusnay. Sidoo kale isla kitaabkaasi safxada xigta safxadii aynu soo xusnay (waa safxada 34d)haddaynu eegno marka uu ka hadlaya qisadan, wuxuu ciwaan uga dhigayaa oraahda ah ”Tani waa wixii lagu tuhmeynay Muxammad ibnu Xajjaaj wadcigiisa”. Kadib wuxuu oranayaa waa beenaale khabiith ah sida uu xusay Al Imaam ibnu Maciin.Ka warran ninka soo weriyey ruwaayadan ee Muxammad Ibn Xajjaaj waa nin beenaale ah oo aanan la xujeysan ahlu xadiiska agtooda, wixiisana aanan la qaadan.”Ninka isaga kasoo weriyey ee ah Maxammad ibnu Ibraahiim Al Shaami, isaguna waa beenaale sidii aan horey usoo caddeynay”, ayuu sheekhu isla safxadaasi ku oranayaa.Ka warran immika labo cilladood oo waa weyn sowma lahan werintan aad soo daliishatay wiilyahow la qalday?
Werintani uu soo minguuriyey sidoo kale waxay ku xusan tahay Musnad Al Shihaab, safxada 46d werinta 856.
Bogga ama safxada 46d illaa 47 ayay ku qoran tahay werintaasi, haddiina aad eegta halka ugu horreysa ee silsiladda werintaasi, kow wuxuu imaamku oranayaa Xadiiskani waa mowduuc, yacni mid been abuurad ah. Wuxuu intaasi sii raacinayaa ”Maxammed ibnu Xajjaaj-na wuxuu Ibnu Caddiyi ka yiri waa xadiis been abuurad badan yahay. Ad Daaraqudni iyo Ibnu Maciinna waxay yiraahdeen waa beenaale been abuur badan. Al Azdina wuxuu yiri waxaa laga soo weriyey Mujaalid oo kasoo weriyey Shicbi oo kasoo weriyey, xadiiska Qis ibnu Sacaadah, mana lahan sal iyo raad, waana mowduuc (been abuurad), raawiga soo weriyeyna wuxuu Ad Daaraqudni ka yiri ”Waa beenaale”. Sidaa oo kale ayuuna Al Imaam ibnu Xibbaan ku tilmaamay”.
Intaas waa sida ku qoran safxada aan soo xusay, ee kitaabkaasi, waana inta werinta la xusin horudhaca ka horreeya ee ku qoran kitaabka.
Cilladda kalee ee ay werintani leedahay waxaa silsiladda werinteeda kujira Mujaalid ibnu Saciid. Bal waayo Mujaalidkani? Kaalay wax ka baro, fur kitaabka Meyzaan At- Tacdiil, ee lagu qoray ragga soo weriyay axaadiista iyo ruwaayadaha. Waxaa iskaleh Imaam Shamsu Diin Ad Dahabi. Fur safxada 23d ee kitaabka, waa ciwaanka Mujaalid.
Eeg turjumada 7076, waa shaqsiga labaad ee lagu tacriifinaya boggaas, waxaa uun ka horreeya Mujaalid ibnu Abii Raashid. Kadib waxaa laguu tacriifinayaa Mujaalid ibn Saciid shaqsiyaddiisa. Ibnu Maciin iyo rag kale oo lamida waxay yiraahdeen ”Lama soo xujeysta ninkan”. Macnaha daliil ma noqdo warkiisa.
Imaam Axmed ibnu Xambil wuxuu ka yiri ”Waxba ma ahan”.
Nisaa’iyi wuxuu ka yiri ”Ma ahan qawi, yacni mid adag oo la daliishan kara”.
Ashajna wuxuu xusay inuu ahaa ”Shiici”.
Daaraqudni wuxuu ka yiri ”Waa daciif ninkan”.
Aqwaashani waa hadallada ku xusan safxada aan kuu sheegay, waana sida ay u tacriifiyeen culimadeennii hore ee Ilaahay ku difaacay nebigooda, kana hortegey inaanan lagu been abuuran. Intaa oo kaliya kuma ekaan doonno, mar kale aan furno kitaabka la yiraahda Ad-Ducafaa wal matruukiin (bimacnaa kuwii daciifka ahaa ee la isaga tegey), waa kitaabka lagu jamciya dadkii la yimid axaadiista iyo werinnada been abuurka ahi, ee looga bartay beenta, ha noqdaan kuwii shiicada, kuwii Islaamka ku cusbaa, kuwii munaafiqiinta iwm. Waxaa iskaleh kitaabkani Al Imaam Ibn Al Jowzi. Fur safxada 35d ee kitaabkaasi, kadib eeg turjumada 2851 waa Mujaalid ibnu Saciid, qofka turjumadaasi lagu macneynaya.
Xasuusnow!! kitaabka uu ku dhex yaal waa kitaabka la yiraahda Ad- Ducafaa wal Matruukiin (kuwii daciifka ahaa ee laysa tegey/ la nacay). Turjumadaasi iyo wixii ay culumada ka yiraahdeen waa tane hoo!!.
2851. Mujaalid ibnu Saciid bin Deey ibnu Maraan Al Hamdaani Al Kuufi, wuxuu wax kasoo weriyey Al Shicbi iyo Qeys ibnu Abii Xaazim.
Imaam Axmed wuxuu xaggiisa ka yiri ”Waa wax ma tare, waxna ma ahan”.
Ad- Daaraqudni iyo Nisaa’iyi, Yaxiic waxay ka yiraahdeen ”Waa daciif”.
Ibnu Xibbaan wuxuu leeyahay ”Ma banaano in la daliishada xujo ahaan ruwaayadahiisa”.
Ka warran marka, nin la diidey wuxuu soo weriya oo dhan in la daliishada walow ay noqdaanba wax wanaagsan, ma waxaad moodeysaa in been abuur intaa dhan laga qaadan karo oo Islaamka iyo ehelkiisa lagu wasakheyn kara?
Intaas oo qura maahane, bal fur kitaabka la yiraahda Al Majruuxiin minal Xadiis oo uu leeyahay Ibnu Xibbaan, safxada 343, turjumada raqamka 1037 waa magaca Mujaalid ibnu Saciid.
Waa tane hoo!! iyana wixii ay culimada ka yiraahdeen ninkan.
Wuxuu leeyahay sheekhu, ”Wuxuu ahaa nin wax isku khalda oo asaaniidda iyo maraasiilta isku walaaqo, mana banaano in la xujeysta warkiisa”.
Yaxyaa Ibnu Maciinna ayaa la weydiiyey Mujaalid ibnu Saciid markaasuu yiri ”Wuxuu ahaa daciif”.
Haddii aan kutusinnay in ruwaayaddu ay tahay mid daciif ah, waxaad mar kale ogaataa si kooban cillada ay leedahay oo ah, wax ka badan saddex cilladood. Ugu horreyn waa mowduuc (been abuur) sida kuxusan masaaniidda iyo kutubbada xadiiska. Marka labaad waxaa kujira rag wada daciif ah oo kala ah Maxammed Ibnu Xajjaaj iyo ina Ibraahiim iyo weliba Mujaalid ibnu Khaalid.
Intaa dabadeed waxaad ogaataa waxa laguu soo dhiibay inay tahay wax aanan Islaamka sal iyo raad toona ku lahayn. Haddii aad kasoo aqrisay kitaab taariikheed oo Islaamna, kitaab taariikheed wax walba ayaa kuqoran, kitaabkana wuxuu qisada usoo weriyey sidii loo yiri isagoo xusaya halka uu kasoo weriyey iyo silsiladdiisa, si daba gal hadday tahay ama loo baahdo loogu samayn kara. Ragga soo weriyeyna wuu xusay, kuwaasoo ay dhacaysa in uuba sheekha ogyahay inay kuyaallaan kutubbadan aan immika soo xusnay. Si kastaba haddii maanta aniga buug aan qoraya aan ku xuso ”sidaa iyo sidaa ayaa la yiri oo waxaa yiri hebel oo hebel kale kasoo weriyey”. Taa macnaheedu ma ahan in waxaasi aan anigu dhahay ama ay jiri karaan. Kaliya waxaa loo baahan yahay cidda tiri ee aan xusay in la daba galo, taasina adigu waad garan weyday oo toos waxaad lasoo carartay shubbahadii, sidiiyoo aad mooddeysay inaad Islaamku duleel ka heshay aad iin iyo ceeb ugu yeesho.
Aan mid kuweydiiyee!!, haddii Nebi Muxammad (NNKH) uu sidaasi samayn lahaa oo run ay ahaan lahayd ma wax bay u dhimi lahayd nebinnimadiisa?
Immikuse ma aragtay in uu beri ka yahay oo aanay ahayn xaqiiq jirta warkaasi? Waxaad la yaabtay in haweeney ka hor timaadda sharciga Alle, oo nebiga Ilaahay aflagaadeysa aanan la dili karin. Waxaan kutusayaa sidii aan horey kuugu sheegeyba halka warkani u ku yaal oo ah Baybalka. Horey ayaan kuugu sheegey wax kastood Islaamka ku tuhmeysa waa wax Baybalka ku dhigan, Islaamkuna uu beri ka yahay.
Fur kitaabka Baybalka qeybta Hosea cutubka 13d faqrada 16d
Hosea 13: 16d Samaria will be made waste, for she has gone against her God: they will be cut down by the sword, their little children will be broken on the rocks, their women who are with child will be cut open.
Hosheeca 13: 16d Reer Samaariya gardarradooda way qaadi doonaan, waayo, way ku caasiyowdeen Ilaahoodii. Seef baa lagu layn doonaa, dhallaankoodana dhulkaa lagu tuuri doonaa, oo naagahooda uurka lehna waa la dooxi doonaa.
Bal indhaha furoo si fiican u aqri mar kale, waa Baybalka halka aad leedahay inuu Ilaahay ku amraya in haweenka uurka ahi caloosha laga soo ridi doono, sabab ay Ilaahay ku caasiyeen darteeda, oo dhallaankooduna dhulka lagu tuuri doono. Marka tan loo eego qisadii beenta ahayd ee aad kasoo minguurisay nebi Muxammad (NNKH) sow Muxammad ma noqonaya mid ka naxariis badan Ilaaha aad aaminsan tahay, waayo waxaad tiri Muxammad (NNKH), wuxuu ka duway oo ka leexiyey haweeneydii ilmaha si aanay dhibaato usoo gaarin, oo haweeneydii oo qura diley?
Beri buu ka yahay nebigii Alle sida aad kusheegtay, laakiin waxaasi iyo wax kasii xun waxaa amraya Baybalka aad aamintay ee aad is moodsiisay inuu yahay naxariis. Naxariista uu Ilaahay koonkani usoo direy waa Nebi Muxammad (NNKH).Adigu waxaad aaminsan tahay inaanu la dili karin haweeney nebi aflagaaddeysa sida aad ku doodeysay (inkastoonay ka suurtoobin nebi Muxammad ”NNKH” inuu diley), laakiin Baybalku wuxuu xusayaa kuwii sanamyada caabbudi jirey sida loo laayay ee aad leedahay Ilaahay baa amray. Haddii aad aqrisa Yexesqiyeel cutubka 9d faqrada 1d illaa 8d waad fajacaysaa. Laakiin keliya aqri faqrada lixaad ee cutubta 9d.Ezakiel 9: 6d Give up to destruction old men and young men and virgins, little children and women: but do not come near any man who has the mark on him: and make a start at my holy place. So they made a start with the old men who were before the house.
Yexesqiyeel 9: 6d Oo waxaad wada laysaan odayaasha, iyo barbaarrada, iyo gabdhaha, iyo carruurta yaryar, iyo naagahaba, laakiinse innaba ha u dhowaanina nin alla ninkii ay calaamaddu ku taal, oo waxaad ka bilowdaan meeshayda allabariga. Markaasay waxay ka bilaabeen raggii odayaasha ahaa oo guriga hortiisa joogay.
Ka warran arrinkani, ma Islaamkaa mise waa Baybalka waxa kani ee xasuuqa ba’an ku haya umadda? Ma garawsatay in Islaamku yahay nabad iyo naxariis, adiguna lagu qalday? Ma garowsatay qisada aad lasoo shirtagtay inay tahay been abuur, iyo mid aanan waxba ka jirin, balse mid iyada ka daran ay ku taal Baybalka? Intaa dabadeed maxaa kuu bannaan oo aanan ahayn inaad diintaada raaxada iyo nabadda iyo wanaagga badan aad ku noqoto? Ilaahay ha kuwaajiya xaqa hana kugu duwa inaad ka badbaadda cadaabta aad kusii jeedda. Kaa hagran mayno wixii talo iyo waano ah iyo inaan kaa shaafinna boogga iyo dhaawacyada loo geeystay laabtaada shubbahaadka foosha xun ee lagu qosla ee maskaxdaadu ay ka buuxiyeen.Wa billaahi towfiiq!!.WQ: Mohammed Tahir Abdi
Afeef: Qormadani waxay u gaar tahay webka caasimada.net iyo qoraha. Lama daabacan karo idan la’aan.
RADDIN SHUBBAHA- Nebi Muxammad (NNKH) ma waxaa la oran jirey Quthum? )